Okthoba. Ukukhethwa kwezindaba zokuhlela | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 01/10/2021 12:00 | Kubuyekezwe ku- 28/09/2021 18:01 | Amahlaya, Abalobi, Amabhuku, I-Novela, Inoveli emnyama, Inoveli yezothando
Okthoba iza nokuningi nokuhle izindaba zokubhala ukubhekana nekwindla ngendlela engcono kakhulu. Futhi njengoba kungenakwenzeka ukuqoqa zonke, lokhu kunjalo Ukukhethwa kwami ​​kweziqu eziyi-6. Inoveli mnyama, amahlaya, inoveli zomlando noma indaba ingane ebheke emaphathini kaKhisimusi angakude kangako.
1 Imfihlo Yabaphothi - USara Penner
2 Ukufa ngoNovemba - uGuillermo Galván
3 Ingulube KaKhisimusi - uJK Rowling
5 UTheodora, uChrysalis waseByzantium - uJesús Maeso de la Torre
6 IBlacksad 6 - Konke kuyawa (Ingxenye yokuqala) - UJuan Díaz Canales noJuanjo Guarnido
Imfihlo ye-apothecary - USara Penner
USara Penner ngumbhali waseMelika oqale kulo nyaka kule noveli bekungeke kube okukhazimula kakhulu. Manje sifika lapha lesi sihloko sokuqala esivele sihunyushelwe ezilimini ezingaphezu kwezingu-40 futhi sesivele sihlelelwe ukulungiswa kwethelevishini.
Ekuqaleni siya ku- ILondon le-XNUMX leminyaka, lapho kukhona ikhemisi elifihlekile elithwele UNella. Kepha lapho ovikelekile, intombazane eneminyaka eyi-12, enza iphutha elibulalayo, ikusasa lakhe lihlehliswa yimiphumela ezohlala amakhulu eminyaka.
Ku okwamanje, isazi-mlando esilangazelelayo okuthiwa UCaroline parcewell uchitha iminyaka yakhe eyishumi eshadile eyedwa. Kepha uzothola umkhondo wokuxazulula ukubulala okuthakazelisayo okwenzeka eLondon eminyakeni engaphezu kwamakhulu amabili edlule. Futhi ikusasa likaCaroline noNella lizohlangana endaweni yonke yezimfihlo, ukuziphindiselela nezindlela lapho laba ababili bengasindisana khona, yize isithiyo sesikhathi.
Kufa ngonovemba - UGuillermo Galvan
Ngemuva kwalokho Isikhathi sokugunda y Intombi enguMathambo, Iyabuya UCarlos Lombardi, Ngakho-ke labo bethu abanqotshwa yileli phoyisa laseMadrid langemva kwempi elenziwe ngu UGuillermo Galvan sisenhlanhleni.
Manje kusiletha ku Novemba 1942, ngemuva kanye neMpi Yezwe II kanye neSpain, ekucindezelweni okugcwele, okugcwele izinhloli. ILombardi ibuyile Madrid futhi usinde ngangokunokwenzeka nge abaseshi. Ngakho-ke awukwazi ukwenqaba noma yimuphi umsebenzi futhi kuzofanele uphenye futhi ulandelele umthengisi ojikelezayo waseJalimane ongaqondakali.
Ngasikhathi sinye ofisa Umlingisi onedumela elingabazisayo ubonakala ebulewe kanti namaphoyisa awanandaba nokuthola ukuthi yini ebangele lokhu. Futhi uLombardi uzophinde abanjwe ecaleni lakhe, lapho kungasweleki khona itulo elibi lokuthengisa ngomzimba, cinema kanye nemakethe emnyama.
Ingulube KaKhisimusi - UJK Rowling
URowling ubuyela ku- umhlaba wezingane ngale ndaba yokuqala kaKhisimusi ehloselwe ukuba ibe ngeyomndeni wonke, hhayi eyabantwana kuphela.
I-protagonist ngu Umunwe, ithoyizi eliyintandokazi ye- Jack, elahlekile ngosuku lwe Ulale kahle. Kepha njengoba kungubusuku obukhethekile bezimangaliso, i amathoyizi aphile. Leyo enikezwe uJack, ingulube entsha kaKhisimusi (esikhundleni sikaDito), izobhuntshisa uhlelo oluyingozi kakhulu: lolo hambo lomlingo lokuzama ukululama futhi lusindise lowo owayengumngani omkhulu kaJack.
Ngemuva kwe-trilogy Las Cenizas de Hispania futhi Igama likaNkulunkulu, buya UJose Zoilo ngale noveli manje enamaViking.
Sisekhulwini le-XNUMX futhi Hrolf ragnallson ishiye eyayo ENorway native ukuhlala nomndeni wakhe e-Erin ekude, lapho ezoba yindoda. Futhi, njengezibulo, uzobe ephethe ukubamba uKhozi lweZiphepho futhi aqondise amadoda akhe kwamanye amazwe ukuze athole ingcebo nodumo. Futhi bazobheka amehlo abo U-Al Andalus. Ngaphambi kokuba zifike osebeni lwe EGallecia ngenhloso yokuphanga abakuthola endleleni yabo ngaphandle kobunzima. Kepha abakwazi lokho URamiro, inkosi yase-Asturian, uthathe isinqumo sokulwa. Ibutho lamaViking lehluliwe futhi I-Hrolf iyabanjwa ngeqembu lama-Asturians. Uba yisigqila futhi ubizwa ngokuthi "Lordemano" ngakho-ke kuzofanele enze okusemandleni akhe ukuze aphile.
Theodora, iChrysalis yaseByzantium - UJesu Maeso de la Torre
Elinye lamagama amakhulu enoveli yomlando yilelo UJesu Maeso de la Torre, owethula lo msebenzi omusha. Ngalesi sikhathi kusisa eConstantinople ngo-548, lapho u-Empress Theodora, unkosikazi ka-Emperor Justinian, esanda kufa ngenxa yosizi olukhulu lwabantu bakubo. Futhi omkhalela kakhulu nguNasica el Hispano, umthenwa onamandla kunabo bonke enkantolo.
Ubemphelezele impilo yakhe yonke eneziganeko futhi uzothatha isinqumo sokubhala indaba eyiqiniso kaTeodora, owesifazane okhaliphe kangaka, okhangayo futhi onenhliziyo enhle, kepha futhi ongenamandla futhi onamandla lapho bekufanele abe njalo.
IBlacksad 6 - Konke Kuwela (Ingxenye Yokuqala) - UJuan Diaz Canales y Khanyisile placeholder image
Kuyihlaya lonyaka, ngaphandle kokungabaza, ikakhulukazi kubalandeli abaningi - engizibona nginokuzinikela phakathi kwabo ikati lomphenyi we-anthropomorphic kusuka kuma-50s abiziwe UJohn blacksad. Okwakho isitolimende sesithupha, Konke kuyawa, okuyingxenye yokuqala yale ndaba entsha. Kube njalo Iminyaka emi-8 yokulinda nokunye okulindelwe njengengxenye yesibili. Kodwa yindlela esebenza ngayo le hlobo lwama-albhamu, enakekelwa kahle futhi ehlonishwa njengaleli saga elenziwe ngumdwebi wekhathuni nombhali wesikrini uJuanjo Guarnido noJuan Díaz-Canales.
Ngalesi sikhathi sineBlacksad ENew York, lapho ezongena khona ngaphansi komhlaba kanye nemikhakha ephezulu yezepolitiki neyezezimali kwenye indaba enginesiqiniseko sokuthi izosazi kancane futhi izosenza sibe mfushane kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Okthoba. Ukukhethwa kwezindaba zokuhlela